Indlela yokoyisa ukufa ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ungoyisa njani uloyiko lwe ukufa. Ukuba kukho inyani engenakuthelekiswa nanto kwihlabathi lethu, kunjalo Ngenye imini siza kufa. Ukufa ngu inyani yendalo ukuba sonke sidlule. Nangona kunjalo, ukususela kumncinci kakhulu, uluntu luye lwafaka kuthi ukwesaba ukufa, kungenxa yoko kuye kwaba luloyiko olunokukukhubaza.
Ngokucacileyo, akukho mntu ufuna ukufa. Ubomi sisipho ukuba yonke into el mundo ufuna ukucudisa kakhulu, kwaye ngenxa yesi sizathu kunzima kuthi ukucinga ukuba ngenye imini siza kuyeka ukonwabela. Kodwa oku oko akuthethi ukuba kufuneka sihlale sisoyika.
La Ibhayibhile isifundisa ukuba ukufa ayisosiphelol. Kwaye, kuba uYesu wanikela ngobomi bakhe ngenxa yethu, sinethemba lokuphila ubomi obungunaphakade kunye naye.
Emva koko siza kuchaza indlela yokoyisa uloyiko lokufa. Kodwa ngaphambi kokuba uqale, kufuneka uqonde ukuba yintoni ukufa ngokutsho kweBhayibhile.
1 Ungoyisa njani uloyiko lokufa ngokwebhayibhile
1.1 Kuyintoni ukufa ngokwebhayibhile
1.2 Yintoni embi kunokufa
2 Ungaloyisa njani uloyiko lokufa kumanyathelo ama-4
2.1 1. Fumana ubomi obungunaphakade ngoYesu
2.2 2. Thatha into yokuba uza kufa ukuze uphile ngonaphakade
2.3 3. Nika ubomi bakho kuYesu
2.4 4. Cela uThixo asuse uloyiko lwakho
2.5 5. Funda ukuba ithini na iBhayibhile ngoloyiko lwakho
Ungoyisa njani uloyiko lokufa ngokwebhayibhile
Kumkristu, ukufa asiyonto nje yendalo kunye nenkqubo yendalo ekufuneka sonke sidlule kuyo ngaphandle kokuxolelwa. Umntu okholelwa kuThixo kwaye akholelwe ukuba ibhayibhile iphefumlelwe ngaYe kufuneka ayazi loo nto ukufa kunentsingiselo eyahluke kwaphela ukuba umhlaba uyazi.
Kuyintoni ukufa ngokwebhayibhile
NgokweBhayibhile, Ukufa kweza ngenxa yesono esahlukanisa noThixo. Simele siyikhumbule loo nto Ungumthombo wabo bonke ubomi. Xa sivukela ilizwi lakhe kunye nentando yakhe, siyazikhwelela kude kuyo yonke into ayimeleyo kwaye, ke, sihamba kude nobomi obungunaphakade.
Xa sithatha isigqibo Siphila ngendlela yethu siyityeshela into ethethwa yiNkosi Ukukhetha iindlela ezingezizo ezo Asibonise zona, kuthetha ukuba siphulukana nokunxibelelana noko simele kona. Ke ngoko, sikhetha indlela apho ubomi bungekhoyo.
Sodwa asinakwenza kwanto ngobomi (phi okanye nini ukuzalwa, ukwandisa ubomi okanye ukuthintela ukuphela). Akukho mandla kuthi okulawula. Umntu, nangona unayo ukukhululwa, ayonelanga: zonke sixhomekeke kubomi obuvela kuThixo. Ngale ndlela, asinako ukuzisindisa ekufeni.
Yintoni embi kunokufa
Esinye seziqinisekiso ezinkulu ekufuneka sonke sibe nazo ebomini yile Ngenye imini siza kufa kwaye nabantu esibathandayo nabo baya kufa, kwaye nangona singathandi ukuthetha ngesi sihloko, yinto yokwenene kuye wonke umntu.
Ngosuku ngalunye oludlulayo, iiseli ziyaguga kwaye ziphinde zivele. Sonke siphantsi kokugula ngesiquphe okanye ukusikelwa umda okuvela kule minyaka idlulileyo.
Ngenxa yale nyaniso, uninzi lwabantu lulindele ukusweleka ngenxa yokwaluphala kwaye luyonwabele impilo kunye nokucaca kwengqondo ixesha elide. Nangona kunjalo, abantu abaninzi abaselula kunye nabantwana bayafa mihla le ngenxa yezifo ezibi, ubundlobongela okanye izinto zendalo.
Nangona kunjalo, kukho into embi kakhulu kunokufa, kwaye kukufa komoya.
Umntu unako Ubomi obufutshane kodwa obonwabisayo kufutshane noThixo. Ngokuchasene noko, kusenokubakho umntu onayo ubomi obude, kodwa ube lusizi kude noBawo. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba silandele amanyathelo uThixo awasibonisa wona ngeBhayibhile, ukuze umoya wethu usibonise indlela azakusinika yona. ubomi obungunaphakade kunye nolonwabo olupheleleyo.
Ungaloyisa njani uloyiko lokufa kumanyathelo ama-4
1. Fumana ubomi obungunaphakade ngoYesu
UThixo ufuna ukusinika ubomi kwakhona, ubomi obuninzi obungapheli apha nokuphela kweentsuku. Eli lithemba laphakade elamiselwa nguYesu Krestu. Wavuka wakoyisa ukufa! Abo bakholelwa eNkosini bayakubanika uvuko kubomi obungunaphakade. Ke ngoko, akuyi kubakho kugwetywa kwabo bakuKristu.
UThixo uyasithanda kwaye akavuyi ngokusweleka komntu. Usimemela kubomi obungunaphakade kwakhona ngoNyana wakhe uYesu Krestu.
Lowo unaye uNyana, unabo ubomi; lowo ungenaye uNyana kaThixo akanabo ubomi.
1 Yohane 5: 12
2. Thatha into yokuba uza kufa ukuze uphile ngonaphakade
Ukufa kunye nokubandezeleka ziziphumo zesono sabantu (ukonakala okupheleleyo). Sonke singaboni kwaye kufanelekile ukohlwaywa ngokushiya uThixo. Kodwa i ukufa ayisosiphelo. Xa sisifa, umzimba ubola, kodwa umphefumlo usaphila. Umphefumlo bubuni bethu, ukuba singobani.
Emva kokufa sinokuhlala noThixo ngonaphakade (yiya ezulwini) okanye uhlukaniswe ngonaphakade kuye (uye esihogweni). Umntu ngamnye unokukhetha ukuba enze ntoni.
UYesu uyakuzalisekisa oko akuthembisileyo eLizwini lakhe. Nabani na ofumana ubabalo lobomi obungunaphakade ngokholo akazogwetywa, kodwa uya kuphila ngonaphakade kunye neNkosi.
Musa ukumangaliswa koku; ngokuba liyeza ilixa abaya kuthi ngalo bonke abasemangcwabeni balive ilizwi lakhe;
baphume ke: abo benza izinto ezilungileyo beze eluvukweni lobomi; ke abo benza izinto ezimbi beze eluvukweni lokugwetywa.
UYohane 5: 28-29
Uya kusula zonke iinyembezi emehlweni akho. Akusayi kubakho kufa, akusayi kubakho lusizi, akusayi kubakho kulila, akusayi kubakho zintlungu, kuba ulungiselelo oludala luye lwanyamalala.
ISityhilelo 21: 4
3. Nika ubomi bakho kuYesu
Kwabo bangamfuniyo uYesu, ukoyika ukufa kunengqondo. Ukufa kunokuba yinto eyoyikisayo. Kodwa UYesu weza ukuze asihlangule ekufeni. Xa wavuka kwakhona, uYesu wakoyisa ukufa. Ngoku ukufa akusenamandla.
Kwabo banoYesu ezintliziyweni zabo, ukufa akusengonobangela woloyiko. Xa sisifa, siya kuba noThixo ngonaphakade, kungabikho lusizi okanye ukubandezeleka. Ukuba awukabuniki ubomi bakho kuYesu, Mmeme ukuba aphile entliziyweni yakho namhlanje. UYesu uyakuthanda kwaye ufuna ukuba nawe ngonaphakade.
4. Cela uThixo asuse uloyiko lwakho
Ukuba woyika ukufa thetha nothixo ngayo. Inokukunceda uphile ngaphandle koloyiko. UThixo unezicwangciso ezilungileyo kakhulu ngobomi bakho kunye nezicwangciso ezingcono ezingunaphakade.
Ukoyika ukufa kuyindalo kwaye kuyimpilo, njengoko kukhusela kwiimeko ezinobungozi. Nangona kunjalo uloyiko lokufa olugqithisileyo unakho kubangele uloyiko, uxinzelelo kunye nezinye iingxaki.
UThixo akafuni ukuba ukoyika ukufa konakalise ubomi bakhoYiyo loo nto wathumela uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuba akusindise. Kuya kufuneka ubuze kuThixo kwaye uthembe ukuba uyakukunceda woyise olu loyiko.
5. Funda ukuba ithini na iBhayibhile ngoloyiko lwakho
La Ibhayibhile isixelela ngezizathu zokuba sisoyika ukufa. Ukoyisa olu loyiko, kubalulekile ukuqonda nokukholelwa kwezi nyaniso.
Nantsi into ethethwa yiBhayibhile ngalo mbandela:
Ukoyika into engaziwayo
Awazi ukuba izulu liyakuba njani, kodwa uThixo uthembisa ukuba kuya kuba kuhle kakhulu. UThixo ulawula kwaye uyakuthanda, unezona zinto zilungileyo kuwe.
Izinto ezingabonwanga liso, nokuba aziva ngeendlebe,
Abavukanga entliziyweni yomntu,
Zizinto uThixo azilungiselele abo bamthandayo.
Eyoku-1 kwabaseKorinte 2: 9
Uloyiko lokuphulukana nabantu obathandayo
UThixo uyakuthanda intanda. Ungamthemba ukuba uza kubakhathalela.
UThixo uthembekile. Uya kukunceda kuyo nayiphi na imeko. Soze ndikushiyeNokuba sekubandezelekeni, nkqu nasekufeni. Iya kuhlala ikunye nawe.
Endiqinisekileyo ukuba akukho kufa, nokuba bubomi, nazingelosi, nokuba zizilawuli, nokuba ngamagunya, nokuba kukwinto ekhoyo, nokuba izayo.
Ukuphakama, ubunzulu, nayo nayiphi na into eyenziweyo ayinako ukwahlula eluthandweni lukaThixo, olukuye uKristu Yesu, iNkosi yethu.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda ukuba woyise uloyiko lokufa. Ukuba ngoku ufuna ukwazi Yoyisa ukudimazeka ngokwebhayibhile, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.